Senior & Junior Salesman | Myint Dachan Co.,LTD. ﻿
· တာဝန်ပေးထားသော ဒေသတွင် အစာရောင်းအားတိုးမြှင့်နိုင်ရန် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေကာ အကောင်ထည်ဖော်ရမည်။
· Customer များအား နေ့စဉ် တွေ့ဆုံကာ အစာအား အသုံးပြုရန် မိတ်ဆက်ရမည်။
· Customer များ၏ အခက်အခဲများကို အရောင်းမန်နေဂျာ အားအစဉ်အမြဲတင်ပြရမည်။
· Seminar များအား လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် စီစဉ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
· Company မှ ချမှတ်ထားသော လစဉ် အရောင်းတန်ချိန် ကိုပြည့်မှီနိုင်အောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရမည်။
· ဈေးကွက်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေ နှင့် နေ့စဉ် အရောင်းအစီအရင်ခံစာကို အရောင်းမန်နေဂျာ အား သတင်းပို့ရမည်။
i.	Develop and implement new sales initiatives, strategies and programs to capture key customers in the assigned territory.
ii.	Understand the needs of customers and createasolution.
iii.	Maintain professional and technical knowledge by participating feed sales seminar.
iv.	Meet planned sales target quarterly and annually.
v.	Provideadetail sales report and market situation to the manager
· B.V.Sc ဘွဲ့ရရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
· အရောင်းနည်းစနစ်များ ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ရမည်။
i.	Bachelor’s Degree from University
i.	2 years minimum sale experience in the feed industry
ii.	Experience in planning and implementing sales strategies
iii.	Excellent verbal communication skills
iv.	Dedication to provide great customer service
v.	Ability to work withateam
Work location No(370), Myaung Daga Thanmani Industrial Zone, Hmawbi Tsp, Yangon
Senior & Junior Salesman Sales & Marketing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss https://www.jobsinyangon.com Myint Dachan Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Jobs Manufacturing Jobs in Myanmar, jobs in Yangon